Threaded Ball ကိုအဆို့ရှင်
Y Filter ရိုက်ပါ
နေအိမ် > ဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှပေးသောအဆို့ရှင်အမျိုးအစားအားလုံးကို GB, JB, SH, HG, CJ နှင့် ANSI, JIS, BS နှင့် DIN ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံခြားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လုပ်၊ စစ်ဆေး၊ လက်ခံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် CQC မှ ISO9001: 2008 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးအာမခံမှုစနစ်ရရှိထားသည်။
၁။ ပေးသွင်းသူအားလုံးအားစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အကဲဖြတ်ပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလက်ခွဲရောင်းသူများအားသာပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ပါ။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများအနေဖြင့်ပေးအပ်ထားသည့်ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများသည်စက်ရုံထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါတင်းကြပ်စွာပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ဂိုဒေါင်ထဲ ၀ င်နိုင်သည်။
၃။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည်နှစ်ဆသုံးစစ်ဆေးမှုစနစ်ကိုတင်းကြပ်စွာအကောင်အထည်ဖော်သည်။ အရည်အချင်းမရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုစက်ရုံမှလွှဲပြောင်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းမပြုရ။
4. တပ်ဆင်ပြီးနောက်, GB13927, JB / T9092, CJ / T3056 စံချိန်စံညွှန်းများ (အလတ်စားရေ, ရေနံဆီ, ဓာတ်ငွေ့) နှင့်အညီပြည့်စုံအစွမ်းသတ္တိကိုနှင့်တံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ;
ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးနှင့်ပို့ဆောင်မှုအချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှတာ ၀ န်ယူသည်။ အာမခံကာလသည်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်နေ့နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှတစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူပါသည်။ အကျိုးဆက်အားမလျော်ကန်သောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းပါမည်။
၁။ ၀ ယ်သူ၏ ၀ ယ်သူစာရင်းကို 086-577-85983298 သို့ပို့ပါ၊ သို့မဟုတ် ၀၈၆-၅၇၇-၆၆၆၈၆၈ သို့ခေါ်ဆိုပါ။
၂။ ဝယ်သူဝယ်ယူသူစာရင်းအားလက်ခံရရှိပြီး၊ ၀ ယ်သူအတွက်အဆို့ရှင်ပုံစံရွေးချယ်မှုနှင့်ဈေးနှုန်း (စျေးနှုန်းစာရင်း) ကိုပေးပါ။
၃။ သီးခြားသဘောတူညီချက် - ပေးပို့မည့်နေ့၊ အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များ။
om ¢အမည်ခံအချင်း၊ အပြည့်အ ၀၊ အချင်းလျှော့။ ပိုက်အရွယ်အစား
medium £အလတ်စား၊ အပူချိန်နှင့်ဖိအားအကွာအဝေးကိုသုံးပါ
‘¤ စမ်းသပ်မှုများ၊ စစ်ဆေးခြင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ
ဖောက်သည်များ၏အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 2. ဤလယ်ပြင်၌ယာဉ်မောင်းအမျိုးမျိုးကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
၃။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်သတ်မှတ်ထားသောအဆို့ရှင်အမျိုးအစားနှင့်ပုံစံကိုပေးလျှင်ဖောက်သည်သည်ပုံစံ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုမှန်ကန်စွာရှင်းပြသင့်ပြီး ၀ ယ်လိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားနှစ်ဖက်နားလည်။ သဘောတူသည့်အခြေအနေများအောက်တွင်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသင့်သည်။
4. အနာဂတ်နှင့်အော်ဒါဖောက်သည်များအတွက်လိုအပ်သောအဆို့ရှင်မော်ဒယ်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အရေအတွက်၊ ပေးပို့သည့်အချိန်နှင့်တည်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါကစုစုပေါင်းအပ်ငွေ၏ ၂၀% အရ၊ ငွေပေးချေမှုအပြည့် ငွေပေးချေမှုကိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီငွေပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်သဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုအချိန်မီစီစဉ်နိုင်သည်။
လိပ်စာ: Yongxing စက်မှုဇုန်၊ Yongxing မြို့၊ Longwan ခရိုင်၊ Wenzhou City, Zhejiang Province
မူပိုင်ခွင့် @ 2021 Zhejiang Minruiï¼ˆFive Starï¼ Valve Co. , LTD ။ - ဂိတ်ပေါက်၊ ဘောလုံးအဆို့ရှင်၊ ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင် - All Rights Reserved ။